Lucinda Riley: iyo minhenga kuseri Chakavanzika cheiyo Orchid | Zvazvino Zvinyorwa
Lucinda Riley Mabhuku
Lucinda Riley aive akakosha munyori weBritish uyo akamira kunze mune yekunyora ndima yemanyorerwo ake akabudirira. Kubva pakaburitswa Chakavanzika cheorchid, munyori akakunda vaverengi vasingaverengeke pasi rose. Mumakore angangoita makumi matatu enhoroondo, mabasa aRiley akaburitswa munyika dzakawanda uye anopfuura makopi emamirioni makumi matatu akatengeswa.
Kumwe kwekubudirira kwake kukuru kwakauya mu2014, pamwe nekumisikidzwa kweakateedzana bilionea: Hanzvadzi nomwe. Imwe yeanoverengeka akateedzana akanakidzwa nekugamuchirwa kwakanaka kubva kune vateveri vayo. Iyi 2021 munyori akatanga: Hanzvadzi yakarasika, chikamu chechinomwe cheunganidzwa. Ichi chinyorwa chekupedzisira chakatora nzvimbo dzekutanga dzekutengesa pasirese kwemavhiki.
1 Mabhuku akanakisa nemunyori
1.1 Chakavanzika cheOrchid (2010)
1.2 Ngirozi Midzi (2014)
1.3 Ivo Vanin'ina Vanomwe: Nyaya yaMaia (2016)
1.4 Kamuri yeguruva (2019)
2.2 Mabasa ekutanga ekunyora
2.3 Kubudirira zvinyorwa
2.5 Lucinda Riley Mabhuku
Mabhuku akanakisa nemunyori
Chakavanzika cheorchid (2010)
Julia Forrest —Muridzi wepiano ane mukurumbira— pfuura nechiitiko chinotyisa izvo zvakabvisa kukosha kwehupenyu hwake. Nechemumoyo, anoenderera mberi anotsvaga nyaradzo padivi pehanzvadzi yake Mukuru, Alice. Mwedzi mishoma inopfuura, uye ivo vaviri vanoenda parwendo kuenda kuimba yeWharton Park (kwavakapedza chikamu chehudiki hwavo uye kuyaruka), mushure mekuziva kuti iri kutengeswa.
Ndangariro dzehudiki hwake dzinouya mupfungwa dzake, paakafara achigovana mugreenhouse nasekuru vake mushakabvu Bill - murimi weiyo imba yepamusoro. Paanosvika, anosangana neshamwari kubva pahudiki hwake, Kit Crawford, mugari wenhaka wekupedzisira wemhuri iyoyo. Akafunga kutengesa chivakwa chisina kusimba chisina kugadziriswa mumakore.
Kuti azadzise chinangwa chake, jaya iri rinobata okisheni kuimba yemba; Julia anopinda muchiitiko ichi. Ikoko, iye anowana kanivhasi ine isingazivikanwe orchid yekuzvarwa kuThailand, kungofanana nemaruva ekunze akura sekuru vake. Kit, zvakare, anomutambidza diary, iyo yaanofunga kuti inogona kunge yaive yemushakabvu Bill. Achishamisika, Julia anonanga kumba kwaambuya vake Elsie, asingazive kuti kushanya uku kuchaburitsa zvakavanzika zvakadzama kubva kare.
Midzi yengirozi (2014)
Greta haana kushanyira imba yake yekare, Marchmont Hall, mumaruwa eMonmouthshire kweanopfuura makumi matatu emakore. Shamwari yake yakatendeka, David, waanodaidza nerudo kuti Taffy, amukoka kuti adzokere ikoko kuzoshandisa Kisimusi pamwe chete, chipo chaanogamuchira asingazeze. Greta haarangariri chero chinhu, kwete kwenzvimbo iyoyo, kana nguva yaaigara imomo, nekuda kwetsaona yakakomba yaakarasikirwa nendangariro.
Pane imwe nguva yakakomberedzwa nemhoteredzo iyoyo — iyo, kunyange ichitonhora, inotonhorera—, inoenda uye tsvaga - Pakati pebazi rematavi— guva. Dombo reguva rinoratidza kuti mwana akavigwa ipapo. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mupfungwa dzaGreta ndangariro dzinotanga kusvika dzakarasika mushure mechiitiko chaakatambura; Taffy anomubatsira kuti avanzwisise.
Uye aya ndiwo maratidziro anoita gakava, pakati penguva mbiri: maXNUMX (apfuura), nemaXNUMXs (rondedzero iripo). Kubva mundangariro kusvika mundangariro Greta iri kugadzirisa zvekare maonero aaive nawo Nyika yake, kusanganisira the mwanasikana wake Cheska, munhu akasviba uye anosarudza chimiro, uye vane zviito zvakakodzerana nepfungwa dzakadzedzereka ...
Sista Vanomwe: Nyaya yaMaia (2016)
Maia D'Aplièse anodzoka nehanzvadzi dzake diki kunzvimbo yavakarererwa. Chikonzero: la zvinosuwisa kufa kwaPa Munyu, uyo, kare kare, akavatora uye akazvipira kuzvitarisira kwavo. Achifungidzira kufa kwake, hunhu hunoshamisa hwakasiya kune mumwe nemumwe wevanasikana vake gwaro nematanho anozovatendera kuti vazive kwavanobva.
Maia - Mushure mekuongorora ruzivo rwamakatambira mutsamba yako-- anoenda kuRio de Janeiro. Paanosvika panzvimbo yakaratidzirwa, protagonist anowana imba yekare yaparadzwa zvachose. Kubvunza kwake kunomutungamira kutsvaga nyaya inodzokera kuma20s, apo Kristu Mudzikinuri paakanga achivakwa.
Panguva iyoyo tambo nyowani yekurondedzera inotanga inosanganisira Izabela Bonifacio, mukadzi wechidiki ane shungu. Anokumbira baba vake kuti vamurege aende kuParis asati aroora. Kamwe muGuta reKwayedza, mukadzi anorovera kuna Laurent Brouilly... uye izvi zvinosvika pakuva kusangana kwakakosha izvo zvinopindura akawanda asingazivikanwe naMaia.
Sista Vanomwe (Ivo ...
Kamuri yeguruva (2019)
KuAdmiral imba, imba huru muChirungu Suffolk kumaruwa, hupenyu hwese Posy Montague. Atove achisvika kwake makore makumi manomwe ekuberekwa, mukadzi rangarira nguva dzinonakidza dzehudiki hwako mariri iye nababa vake vakabata butterflies kungoyemura runako rwavo ndobva ndavasunungura. Chembere inorangarirawo nguva dzerima dzakamuratidzira muhupenyu hwake hwese.
Posy aifanira kuva chirikadzi yekutanga, saka aifanira kurera vana vake vaviri ari ega:Nick y Sam. Mamiriro ake ezvinhu azvino amutungamira kuti aite sarudzo yeku isa imba yemhuri iri kutengeswa -Izvi kunyangwe kuda kwake chivakwa, uye kunyanya kune inoyevedza gadheni kwaakakumikidza kwadarika makore makumi maviri nemashanu. Icho chikonzero: Admiral imba inoderera nekukurumidza, uye Montague, angangoita makumi manomwe emakore, haakwanise kugadzirisa.
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, iyo matriarch ichafanirwa kubata nayo mamwe matambudziko akaikomberedza. Mwana ane matambudziko edoro, rudo rwekare runoonekazve kuratidza chakavanzika, uye zvakapfuura zvaasingazive, iyo yakavanzwa mumadziro eimba.
Iyo rondedzero inouya uye inoenda pakati pa1943 na2006, mairi nhoroondo yakapfuura izere nezvisarudzo zvisirizvo inoratidzwa izvo zvine simba rakakura pane izvozvi uye kuti chete rudo rwechokwadi runogona kukanganwira.
Imba ye ...
Lucinda Edmonds akazvarwa neChishanu Kukadzi 16, 1968 muLisburn, Ireland. Akagara makore anosvika matanhatu mumusha weDrumbeg. Ipapo akatamira nemhuri yake kuEngland, uko akabatanidza zvidzidzo zvake zvekutanga nemakirasi ebhaleti. Semwana, munyori aive nekufungidzira kukuru, munguva yake yekusununguka aifarira kuverenga nekunyora nyaya iyo yaakabva aronga achishandisa madhirezi amai vake.
Kubva achiri mudiki, rudo rwaLucinda rwekuita hunyanzvi rwakakunda. Pazera remakore gumi nemana akaenda kuLondon, kwaakanyoresa mumutambo wekutamba nemadhirama. Mushure memakore matatu ekugadzirira, akasvitsa chinzvimbo chakakosha pane akateedzana Iyo Nyaya Yevanotsvaga Pfuma, paterevhizheni network BBC. Shure kwaizvozvo, akashanda kwemakore manomwe akateedzana padanho rehunyanzvi mu theatre, terevhizheni uye cinema.
Mabasa ekutanga ekunyora
Nemakore gumi nemashanu uye mushure mekuneta uye kupisa muviri, Riley akaonekwa aine hutachiona hweEpstein-Barr. Urwere uhu hwakamugarisa pamubhedha kwenguva refu. Munguva iyi, akanyora bhuku rake rekutanga, Vanoda uye Vatambi (1992). Kunyangwe hazvo isina kukanganisa kukuru, basa rakashanda sekurudziro. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mukadzi weIrish akawiriranisa hupenyu hwemhuri yake neyekunyora, ndokuenderera mberi nekugadzira mamwe masere enganonyorwa.
Nekuda kwematambudziko ake neLMT (kudzokorora kukuvara kwekufamba) uye kusagadzikana, akafunga kutenga dictaphone kuti asapedze nguva yakawandisa akagara pamberi pekombuta. Izvi zvakabatsira kwazvo kuita kwavo.
Kwemakore 18 anotevera, munyori akatarisa mukugadzira mhando yenyaya isiri yekutengesaAsi chimwe chinhu chaanoda kuzviverengera. Kune yake rondedzero akawedzerawo nhoroondo dzezvakaitika izvo zvakabvumira izvo zvirongwa kuti zvipinde zvakanyanya muvaverengi.
Izvo zvambotaurwa zvakanyatsobatana kuziva izvozvo munyori mumwe chete akadaro: "Zvachose Ini ndakave ndakasikwa ndakakweverwa kune yakapfuura uye ndagara ndichiverenga nhoroondo dzenhoroondo. Nguva yangu yandaida ndeye 1920 / 30s uye vanyori vakanaka vakaita saF. Scott Fitzgerald naEvelyn Waugh ”.
Zvakanga zvakaita seizvi Muna 2010 akaburitsa raingave iro basa raizomuisa mukurumbira wepasi rese: Chakavanzika cheorchid. Iyi nhoroondo yakabata nzvimbo dzepamusoro dzekutengesa kwenguva yakareba. Iyo fomula yaive yakakurumbira zvekuti Riley anotevera mabasa mana akave zvakare bestsellers.
En Zvita wa 2012, ndakafunga kutanga nesaga yemhuri izvo zvaitenderera pamusoro pevamwe vakadzi vadiki uye nababa vavo vanehunhu, vaakatumidza kuti: Hanzvadzi nomwe. Kubva pakutanga, iko kuburitswa zvakaguma mukubudirira kuzere. Nekudaro, mu2014 yakatanga kuburitsa bhuku mune ino nhevedzano gore gore, pane izvo zvange zviine zvikamu zvinomwe kusvika parizvino.
Zvaitarisirwa , que en el 2022 ichabudiswa Atlas: Iyo Nyaya yePa Munyu, semubatsiri kune saga. Zvakadaro, rufu zvisingatarisirwi yemunyori yakatora mukana zvinosuruvarisa kuzvirongwa. Zvisinei, mwanakomana wake, Harry Whittaker, Akataura kuti anoteerera nezvishuwo zvaamai vake uye achange achitarisira kutora chikamu chechisere en chitubu che 2023.
Panyaya iyi, Whittaker akati: “Amai vakandiudza zvakavanzika zvemitambo uye ndichachengeta vimbiso yangu yekuvaudza vaverengi vakazvipira.". Jaya iri richava munyori-webasa webasa.
Lucinda riley akafa paJune 11, 2021, pamakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa. Hama dzake dzakazivisa kufa kwake kuburikidza neshoko, mushure mekurwa kwemakore mana nekenza inotyisa.
Musikana ari padombo (2011)
Chiedza kuseri kwehwindo (2012)
Pakati pehusiku kwakamuka (2013)
Chakavanzika chaHelena (2016)
Tsamba yakanganikwa (2018)
Imba yeguruguru (2019)
Saga Hanzvadzi nomwe
Sista Vanomwe: Nyaya yaMaia (2014)
Sisi Storm: Nyaya yaAlly (2015)
Iyo Shadow Sista: Nyaya yeNyeredzi (2016)
Sisi Pearl: Nyaya yaCeCe (2017)
Hanzvadzi Mwedzi: Nyaya yaTiggy (2018)
Hanzvadzi Zuva: Nyaya yaElectra (2019)
Hanzvadzi Yakarasika: Nyaya yaMerope (2021)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Lucinda Riley Mabhuku
Bhuruu Jeans. Kubvunzana nemunyori weThe Camp